Tottenham oo baacsaneyso Anthony Martial – Radio Muqdisho
Tottenham oo baacsaneyso Anthony Martial
Naadiga Ingiriiska ee Tottenham ayaa qaadeyso tallaabo ay kusoo xerogelineyso laacibka garrabka ee Manchester United Anthony Martial, kaas oo ay bartilmaameedsaneysay xagaagan.
Martial ayaa la fahamsan yahay inuu ka tagayo garoonka Old Trafford, isagoo raadinayo naadi uu si joogto ah ugu ciyaaro, tan iyo markii uu bishii January yimid Alexis Sanchez waxaa hoos u dhacay fursadihii uu kaga soo muuqan jiray safka hore ee United.
22-sanno jirkaan ayaa seeggayo cayaaraha koobka adduunka, waxaanna laga saaray liiska xiddigaha Faransiiska ee ku wajahan Ruush-ka.
Wargeyska Daily Mail, ayaa ku warramayo Tottenham inay aad u raadineyso saxiixa xiddiga reer Faransa.
Martial, ayaa kasoo muuqday Manchester United 136 ciyaarood kaddib seddex xilli ciyaareed uu ka tirsan yahay waxanna uu dhalliyay 36 gool.
Rivaldo oo ka hadlay saxiixa cusub ee United Fred
Hector Cuper: “Xaaladda Saalax waa ay soo hagaageysaa”